Alahady 7 Febroary 2021 Alahady 7 Febroary 2021 Wendy Covey
Tsy matihanina ny injeniera satria fomba iray hijerena an'izao tontolo izao. Ho an'ny mpivarotra, ny fiheverana an'io fomba fijery io rehefa miresaka amin'ny mpihaino teknika tena mahay dia mety ho fahasamihafana eo amin'ny fandraisana ho zavatra matotra sy ny tsy firaharahiana. Ny mpahay siansa sy ny injeniera dia mety ho mpihaino henjana amin'ny famakiana, izay ny antony mitarika ny State of Marketing to Engineers Report. Nandritra ny taona fahefatra nisesy, TREW Marketing, izay mifantoka manokana amin'ny marketing amin'ny teknika
Ny olana maoderina dia mitaky vahaolana maoderina. Na dia marina aza io sentiment io, indraindray, ny paikadim-barotra taloha tsara no fitaovam-piadiana mahomby indrindra amin'ny arsenalin'ny mpivarotra nomerika. Ary misy zavatra antitra sy porofo adala kokoa noho ny fihenam-bidy? Ny varotra dia niaina fahatairana tampoka vokatry ny areti-mandringana COVID-19. Sambany teo amin'ny tantara no nandinika ny fomba fiasan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny toe-javatra tsena sarotra. Fanidiana maro be no nanery ny mpanjifa hiantsena an-tserasera. Ny isa
Ireo orinasa dia mitady hatrany fomba hanatsarana ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny asany. Ary io dia ho lasa fifantohana manan-danja kokoa fotsiny raha mbola manohy mivezivezy amin'ny toetr'andro ara-barotra sarotra sy miovaova COVID isika. Soa ihany fa miroborobo ny ecommerce. Tsy toy ny antsinjarany ara-batana, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fameperana areti-mifindra, ny fivarotana an-tserasera dia miakatra. Nandritra ny vanim-potoanan'ny fety 2020, izay matetika ny vanim-potoana fiantsenana be atao indrindra isan-taona, ny fivarotana an-tserasera any UK dia nihena